Guddiga Amniga Qaranka oo go’aanno ka soo saaray waddooyinka xiran ee caasimadda | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Guddiga Amniga Qaranka oo go’aanno ka soo saaray waddooyinka xiran ee caasimadda
Guddiga Amniga Qaranka oo go’aanno ka soo saaray waddooyinka xiran ee caasimadda
Guddiga Amniga Qaranka oo kulan ku yeeshay caawa magaalada Muqdisho ayaa soo saaray awaamiir ku aaddan amniga caasimadda iyo Dekedda Muqdisho.
Guddiga waxa uu tacsi u diray dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee ku waxyeelloobey falalkii u dambeeyey ee Argagixisada Al-shabaab ka geysteen magaalada Muqdisho.
Guddigu waxa ay ku amreen Wasaaradaha, Maaliyadda, Gaadiidka, iyo maamulka gobolka Benaadir in ay dib u eegis ku sameeyaan hannaanka isticmaalka waddooyinka caasimadda, bacdamaa ay sii kordheen tirada Gaadiidka iyo Bajaajyada ee soo galeysa gobolka Benaadir.
Previous articleWasaaradda A/Gudaha Koonfur Galbeed oo ka warbixisay qorshaha awood qaybsiga ee goleyaasha deegaanka ee Baydhaba.
Next articleGuddoomiyaha G/Banaadir iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray Dalka Sweden